नेकपा फुटको संघारमा पुगेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपतिले पठाए यस्तो सन्देश, अब के गर्लान ओली-प्रचण्ड ? — Imandarmedia.com
नेकपा फुटको संघारमा पुगेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपतिले पठाए यस्तो सन्देश, अब के गर्लान ओली-प्रचण्ड ?
काठमाडौँ । फुटको डिलमा पुगेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नफुट्न भन्दै सन्देश पठाएका छन् । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेताहरुलाई भेटघाटलाई तीब्रता दिएकी छन् ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष विभाजनउन्मुख दिशामा अघि बढिरहेका बेला नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीनिकट नेताहरूसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेको भेटवार्तालाई रहस्यका साथ हेरिएको छ । भेटलाई लिएर भइरहेका विभिन्न आशंका र अड्कलबाजीका बीच देउवाले आइतबारको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै किसिमको गोप्य सम्झौता नभएको प्रस्ट्याएका छन् ।